खगोलशास्त्रमा भयो अहिलेसम्मनै नभएको यस्तो चमत्कार !
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » खगोलशास्त्रमा भयो अहिलेसम्मनै नभएको यस्तो चमत्कार !
बुधबार २७ चैत, २०७५
एजेन्सी । ब्ल्याक होलको पहिलो तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । इभेण्ट होराइजन टेलिस्कोप नामक परियोजनाअन्तर्गत विश्वका विभिन्न ८ स्थानमा रहेका रेडियो टेलिस्कोपको सहायताबाट पहिलोपटक ब्ल्याक होलको तस्वीर सार्वजनिक गरिएको हो ।
तस्वीर सार्वजनिक गर्दै इभेण्ट होराइजन टेलिस्कोपकका निर्देशक तथा हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता सेफर्ड डोलेम्यानले ब्ल्याक होल ब्रह्माण्डको सबैभन्दा रहस्यमय विषय भएकाले यसको तस्वीर सार्वजनिक हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् ।
तस्वीर लिइएको ब्ल्याक होल पृथ्वीबाट ५ करोड ५० लाख प्रकाशवर्ष टाढा मेसियर ८५ तारापुञ्जको रहेको बताइएको छ । तस्वीरमा अत्यन्त भारी ब्ल्याक होलको वरिपरी ब्रह्माण्डीय धुलोका कण र ग्यासहरु देख्न सकिने इभेण्ट होराइजन टेलिस्कोपले जनाएको छ ।
खगोलशास्त्रीहरुका अनुसार ब्ल्याक होल ब्रह्माण्डमा रहेको त्यस्तो स्थान हो, जहाँबाट प्रकाससहित कुनै पनि भौतिक वस्तु उम्केर जान पाउँदैन । यसकारण ब्ल्याकहोललाई देख्न नसकिने बताइन्छ । अत्यन्त ठूलो मात्रामा गुरुत्वकर्षण शक्ति हुने भएकाले त्यहाँ कुनै पनि भौतिकशास्त्रका नियमहरु लागू हुनै नसक्ने खगोलशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
पहिलो पटक ब्ल्याक होलको परिकल्पना भने महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले आफ्नो सापेक्षतावादको सिद्धान्तमा गरेका थिए । चिली र अन्टार्कटिकादेखि स्पेनसम्म राखिएका रेडियो टेलिस्कोपको सञ्जालको सहायताबाट पहिलोपटक ब्ल्याक होलको तस्वीर सार्वजनिक हुनुलाई भने खगोलशास्त्रमा चामत्कारिक विकासको रुपमा लिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । खबरको मुल स्रोत पढ्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।